Njodzi nhatu dzeKubatana kweKushambadzira uye Maitiro Ekuzvidzivirira | Martech Zone
Iyo yekudyidzana indasitiri iri nuanced. Kune vatambi vazhinji, zvidimbu, uye zvinofamba zvikamu. Nepo mamwe eaya ma nuances ari ayo anoita yemubatanidzwa modhi kuti ive yakasarudzika uye yakakosha, senge yekubatanidza muripo kumhedzisiro, kune zvimwe zvisinganyanyodiwa. Zvakare ndezvekuti, kana kambani isingazive nezvavo, vanoisa panjodzi yekukuvadza yavo.
Kuti makambani atore mukana wakazara uye vadzokere mukudyara iyo chirongwa chekubatana chinokwanisa kugadzira, vanofanirwa kunzwisisa nekuziva zvimwe zvinhu uye nuances zveiyi indasitiri. Heano matatu ekuchenjerera:
Vabatanidzwa Vasinga Gadzi Kukosha
Vabatsiri ndevashambadziri. Ivo vanosanganisira zvemukati mabloggi, ekuongorora masayiti, zvikoro, nemasangano, kutumidza mashoma, uye anogona kuve anoshamisa anoshanda mukusimudzira zvigadzirwa zvemuchina, uye masevhisi. Iyo mizhinji yakawanda ine mbiri ine mbiri uye inogara ichifambisa zviri pamutemo kuwedzera kwekuwedzera kwemakambani. Zvisinei, kune vamwewo vasingadaro.
Mukushambadzira kwehukama, pfungwa ye "kuwedzera" inowanzoreva kutengesa izvo mushambadzi angadai asina kuwana pasina mupiro wemubatanidzwa. Mune mamwe mazwi, mubatanidzwa uri kutyaira mutengi mutsva kukambani.
Iko kunowana nuanced ndipo panofunga kambani kuti vese vanobatana muchirongwa chavo vari kutyaira kutengesa kwevatengi nyowani apo, muchokwadi, kune vamwe vari kunyanya kubatsirwa nekuedza kwevamwe vanobatana kana chiteshi.
Semuenzaniso, vamwe vanobatana (isu tichavadaidza kuti "vekupedzisira-mune vanobatana") vanogadzira avo emabhizinesi mamodheru kuyedza kutora vatengi vatove mukutenga kana munzira yekutengera. Nekuita izvi, ivo vanogona zvakare kukanganisa zvakashata vanobatana avo vari kutyaira pamusoro-pe - fanera kukosha kwechiratidzo uye vatengi vatsva kuburikidza neabo blog, yemagariro midhiya chiteshi, wongororo saiti, nezvimwe.
Nekubatirira mutengi nepo chinangwa chavo chekutenga chatokwirira kana iko chaiko pasati pari kutengeswa, ava vekupedzisira-mune vanobatana vanowanzo kuwana kiredhiti nekuda kwezvavakaita zvishoma kuti vatange kana kupa chero kuwedzera kukosha kune. Nekudaro, makambani anopedzisira abhadhara aya ekupedzisira-muhukama makomisheni akakosha.
Kuti udzivise iyi mhando yepasi kune isina kukosha chiitiko muchirongwa chako, zvakakosha kuti usatambira mhedzisiro pakatarisana-kukosha. Chera matekiniki evamwe vako kuti unzwisise zvechokwadi maitirwo avari kuita maraki yako uye funga kuronga yako yekunze modhi modhi kuti isabhadhare hunhu uhu.
Asina tsika Affiliates
Kunyange vazhinji vanobatana vari vehukama vane hunhu vanotyaira kukosha kwakakosha kumakambani, maapuro akaipa aripo, zvinosuruvarisa. Vashambadzi vasinganetseke ava havafanirwe kuvhiringidzika nevanobatana avo vangangowedzera kuwedzera kukosha. Kwete, aya marudzi eanobatana anonyanya kushata. Ivo nechinangwa kuita zvinonyengera zvekushambadzira zviitiko kuunganidza makomisheni.
Semuenzaniso, munguva pfupi yapfuura chinyorwa, Dr. Mehmet Oz akagovana nyaya yake yega yekuti vamwe vanehunhu zvine mutsigo sei uye vashambadzi vepamhepo vanoshandisa fanika dzake kutengesa uye kukurudzira acai berry nezvimwe zvigadzirwa - zvese pasina mvumo yake. Yakave yakaipa kwazvo zvekuti yakaisa mhando yake nekuvimbika panjodzi. Kuti udanidzire kune ino yakazara nyaya, Dr. Oz vakazvipira zvikamu zvakawanda yeterevhizheni yake inoratidza kumusoro wenyaya, kunyangwe kuhaya vaongorori vega kuti vaone kuti ndivanani vanhu vasingazivikanwe vekutengesa uye vanodzidzisa veruzhinji kuti vari kunyengerwa sei zvine chinangwa.
Mamwe makambani anoziva maapuro akashata aya asi anofuratira nekuti maitiro avo ekutengesa anounza mari. Mamwe makambani haana zano rekuti aya marudzi evanobatana ari muchirongwa chavo kana kusimudzira mhando yavo nenzira dzisiri pamutemo kana dzisina hunhu. Zvisinei, chero mamiriro ezvinhu haaratidzi zvakanaka kukambani kana kuratidza chirongwa chakabudirira.
Zvakafanana nemabatiro aunogona kuita kudzivirira vanobatsirana vasina kupa chero kukosha, kudzivirira vasina hunhu kuti vapinde muchirongwa chako zvinoda kuti iwe utarise mumwe nemumwe wako zvakanaka, uve neruzivo rwakajeka pane zvavari kuita kusimudzira uye kumiririra chiratidzo chako uye kuongorora zviitiko zvavo kana vagamuchirwa muchirongwa chako.
Kune mazhinji enhoroondo yeindasitiri yakabatana, netiweki dzakamiririra vese vanobatana nevashambadzi muchiitiko chimwe chete uye vanobhadharisa "mari yekuita" kuita kudaro. Nepo chimiro ichi chisiri chisina hunhu kana chisiri pamutemo, hachisiye nzvimbo yekutarisa kwakaringana uye zviyero, saka zvinokurudzira zvinomisikidzwa zvisirizvo. Izvi zvinokurudzirwa zvisirizvo zvakakonzerawo nyaya dzakakomba, dzinosanganisira kubiridzira, bhizinesi rekutengesa, uye cookie stuffing.
Nhasi, kunyangwe hazvo indasitiri yakashanduka nekukura, zvimwe zvezvakakanganiswa zvisirizvo zvichiripo nekuti zvinobatsira vazhinji vevatambi muketani yekoshi; kuvhara hunhu uhwu kunogona kureva kushoma purofiti. Neraki, pane makambani ari kuwedzera kunzwisisa nezvekuti vaanoshanda navo ndiani. Ivo vari kutanga zvakare kurasa vavakaroorana navo vasina musana, avo vasiri kumiririra yavo brand nekuvimbika, uye vanogamuchira matambiro. Aya ndiwo mamiriro ekugashira uye ayo achabatsira iyo yakabatana modhi kusvika panzvimbo yekuti munhu wese ave nemukana wekugona uye kushanda pamwechete zvine zvibereko.
Nuances iripo mune yega indasitiri. Zvimwe zvinotungamira mukukwikwidza mukana apo vamwe vanogona kukuvadza munhu chiratidzo. Nokusarudza vavakaroorana navo nokungwarira, uchida kujekesa kubva kwavari, uye kuona kuti pane hukama hwakajeka pakati pemhedzisiro yauri kuwana uye nemari yauri kubhadhara, iwe unozokwanisa kukohwa mibairo iyo yakasarudzika yakabatana chirongwa chinopa. .
Tags: affiliateaffiliate marketingcookie stuffingchiremba ozdr ozkubiridziraMehmet Ozshawn hoganshoemoneykutengesa zita rekutengesazvisina hunhu zvakabatana
Robert Glazer ndiye muvambi uye Managing Director we Kumhanyisa Partner, muvambi, uye Sachigaro weBrandCycle uye munyori weKuita Kudyidzana Kudyidzana: Iyo Yakaongororwa Kare, Kuchinja Razvino uye Rinonakidza Ramangwana reKubatana Kushambadzira. Iye ari serial muzvinabhizimusi ane yakasarudzika track rekodhi uye kuda kwekukura kwemari uye purofiti kumakambani anoenderana neB2C, achibatana nemhando dzakadai seAdhidas, ModCloth, Reebok, Target, Tiny Prints, Gymboree, uye Warby Parker.